Teknolojia ho amin’ny fangaraharana: Tatitra farany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Magyar, Ελληνικά, македонски, 한국어, Shqip, русский, বাংলা, English
Faly ny Tambajotran'ny teknolojian'ny fangaraharana fa mivoaka izao ny tatitra farany , Sarintanin'izao tontolo izao momba ny fampiasana ny teknolojian'ny fangaraharana sy ny asa madio.
Vao navoakan'ny Transparency and Accountability Initiative (@TAInitiative) miaraka amin'ny tatitra am-polony hafa momba ny hetsika fampangaraharana asa manerana izao tontolo izao izy io. Mifototra amin'ny seha-pikarohana telo samihafa ny tatitra: Fiantraikany sy Fianarana, Teknolojia vaovao, ary ny Fanavaozana politika.
Isaorana be dia be ny Transparency and Accountability Initiative tamin'ny fanohanany ny asanay, isaorana ny ekipa mpikaroka tamin'ny asany mampitolagaga ary isaorana i David Sasaki, izay nanokatra sy nitantana ny dingana fanombohana teo amin'ny Tambajotran'ny teknolojian'ny fangaraharana, izay nametraka ny fototr'ity tatitra ity.
Ny ankamaroan'ny tetikasanay dia nifantoka tany amin'ny rafitra mpanatanteraka na mpanao lalàna tany anivon'ny fitondrana. Kely ihany ny tetikasa nitodika tany amin'ny rafitra fitsarana, tany amin'ny fampitam-baovao, tany amin'ny sehatra tsy miankina ary tany amin'ny mpanao fanampiana.
Efa mila hanasaka ny isan'ny tetikasa no mifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Raha maro amin'izy ireo no mampiasa ny Ushahidi, misy kosa ny sasany nanao ny azy manokana, anatin'izany ny manambatra ny vaovaon'ny fifidianana avy any amin'ny loharanom-baovao isan-karazany ho ao amin'ny toerana iray ary eo ihany koa ny mametraka ny vaovao azo avy any amin'ny [fanarahana] fifidianana ofisialy ao amin'ny Google Maps [sarintany Google].
Maro amin'ny tetikasa any amin'ny faritra maro no te-hifantoka amin'ny fangaraharan'ny fanaovan-dalàna, amin'ny fanarahana ny fomba fandaniana ny lalàna sy ny famoahana ny mombamomba ny olomboafidy tsirairay miaraka amin'ny biografiany sy ny isam-bato [isan-jato] azony. Ny sasany indray moa nampiditra ny mombamomba ny antoko politika na ny voarakitra ho vola laniny nandritra ny fifidianana mpanao lalàna.
Ny fijerena ny angom-bovao sy ny fitaovana iseraserana ihany koa no lakile iray amin'ny mihoatra ny antsasaky ireo tetikasa nanaovanay fanadihadiana, sy ny karazana fanangonana angom-baovao avy amin'olo-tsotra. Eo ho eo amin'ny ampahatelo'ny tetikasa no mampiasa fiantso finday amin'ny lafiny sasany, ny ankamaroany dia amin'ny alalan'ny fahafahan'ny olona manoratra na mandray vaovao amin'ny alalan'ny hafatra an-tsoratra.
Mbola hisokatra hatrany ny vohikalan'ny tambajotran'ny Teknolojian'ny fangaraharana izay ahafahana ifampizarana tetikasa, fitaovana mbamin'ny hevitra ahombiazana amin'izay atao sy ho an'ireo haka loharanon-kevitra avy amin'ny asa vitan'ny hafa. Afaka misoratra anarana amin'ny lisitra mailaka andefasam-baovao, mamaky na mandray anjara amin'ny lahatsoratra manokana ato amin'ny Global Voices Online, ary manaraka anay ao amin'ny Twitter (@techtransparent) sy Facebook. Mbola vao andala-mpisongàna ity taranja iray ity, ary ny tadiavinay dia ny hampivelatra ny ezaka manerantany amin'ny alalan'ny fandraisanay anjara ao anatin'ny fiasana miaraka sy ny fiseraserana miampita sisintany.